Tsara kalitao ny fandraman’i Boeny | Région Boeny
Atrik’asa fandrafetana ny drafitr’asa-paritra ho an’ny kaomity maharitry ny vovonana fandrama no notanterahina tao amin’ny Tranoben’ny Varotra sy ny Indostrian’i Mahajanga, ny larobia 22 sy lakamisy 23 febroary 2017.
Hijerena manokana ny fomba hanamorana ny fifandraisan’ny sehatra tsy miankina amin’ny Sampandraharaham-paritry ny Tontoloiainana, ny Fiompiana ary ny Varotra eto anivon’ny faritra Boeny no antony nanatanterahana ny fivoriana . Vina ny ahafahan’ireo mpisehatra rehetra hamoaka vokatra fandrama manaraka ny kalitao sy ny fenitra mba hahafahana mitodika amin’ny tsena iraisam-pirenena.
Nambaran’ireo mpisehatra nandritra ity fotoana ity ny fahavononan’ izy ireo hanohy ny asa ary mikasa ny hampitombo hatrany ny isan’ny rogom-pandrama ireto farany ankoatra ireo 1 000 efa naparitaky ny GIZ/PAGE (Programme d’appui à la Gestion de l’Environnement) tato anatin’ny faritra Boeny tamin’ny taona 2016. Marihana moa fa ny GIZ/PAGE no mpanome tolo-tanana ara-bola sy ara-tekinika ireo mpisehatra ao anatin’ny rojo-pihariana fandrama eto Boeny.
Ny tanjonan’ny atrikasa dia ny fandrafetana ny asan’ny vovonan’ny fandrama mba hanatsarana ny fitaovana sy hampaharitra ny asan’ny mpiompy, ny mpivarotra ary ny mpanodina. Natao moa izany mba hahaleo tena ireto farany fa tsy hiandry fanampiana lavareny avy amin’ny mpamatsy vola.
Notontosana nandritra io roa andro io ihany koa ny famolavolana ny sata sy ny fitsipika hifampifehezana ary ny rafi-pitantanana ao anatin’ny vovonan’ny fandrama Boeny. Teo ihany koa ny fampahafantarana ny vina ho an’ny taona 2017 ary ny jery todika ho an’ny taona 2016 hahafahana indrindra manatsara ny vokatra amin’ity taona ity.
Manana tombony ny Faritra Boeny amin’ny resaka fenitra sy kalitao hoy ny Lehiben’ny Kabinetra Atoa Hemedy teo ampisoloana tena ny Lehiben’ny Faritra ka irarina ny hitohizan’izany hoy izy. Miavaka tokoa mantsy ny fandraman’i Boeny raha ny taha ny rano izay kely dia kely ao anatin’ny rano-pandrama no avohitra. Ampirisihana ireo mpizaika araka izany hiaro ny tontoloiainana sy ny ala voajanahary mba hampaharitra io rojom-pihariana fandrama io.